Bixinta dariiq caafimaad oo ka sii wanaagsan - Cunnooyinka Lugaha
Bixinta waddo caafimaad wanaagsan
Iyada oo qayb ka ah taxane marmar ah oo ku saabsan sida dadku siyaabo kala duwan uga faa'iidaystaan Cunnooyinka Gawaarida, waxaan jeclaan lahayn inaad kula kulanto Tom, cunno qaataha Koonfurta St. Paul. Wuxuu halkan kula sawiran yahay Sen. Tina Smith, oo iyadu dhowr cunno gaarsiisay dadka qaata gugan si ay wax badan uga bartaan barnaamijka.
Tom Barger waligiis kuma fikirin Cunnooyinka Wheels inay ikhtiyaar u tahay isaga ilaa xirfadle daryeel uu ku xusay inay macquul tahay. Hadda wuxuu isweydiinayaa halka uu la’aantiisu ahaan lahaa.
Tom, halyeey ka soo noqday Dagaalkii Fiyatnaam, waa 67 jir keligiisna la nool bisaddiisa gurigiisa ku yaal Koonfurta St. Paul. Wuxuu la noolaa Cudurka Parkinson inta badan noloshiisa qaangaarka ah maalmahanna saameynta cudurka ayaa ku adkeyneysa inuu istaago muddo kororsi kasta.
Sababtoo ah awoodiisa inuu wax karsado waxay ku egtahay cuntada diyaarka ah ee uu ku ridi karo foornada ama microwave, maareeyaha kiiskiisa ayaa soo jeediyay inuu siiyo Cunnada Wheels isku day. Wixii Tom uusan ogaanin waa intee in le'eg helitaanka cuntada maalinlaha ah ayaa ka caawin doonta isaga.
"Waan jeclahay khudaarta," ayuu yidhi. “Liiska oo dhan runtii wuu fiican yahay. Laba suul on noocyo kala duwan.
Kahor intuusan iska qorin Cuntada Lugaha, Tom wuxuu sheegay in cuntooyinka kaliya ee uu awoodo inuu diyaariyo ay ka maqnaayeen macaan iyo nafaqo. Wuxuu qaddariyaa cunnooyinka maalinlaha ah ee ka caawiya inuu u aado culeys caafimaad.
Ku noolaanshaha dakhli go'an, wuxuu kaloo sheegay in cuntada tayada leh ee uu ka helo Cunnada on Wheels ay adkaan doonto in lagu bixiyo miisaaniyaddiisa. Tom wuxuu uqalmaa cunnooyinka la kabo iyada oo loo marayo barnaamijka ka-dhaafitaanka Medicaid ee gobolka, taas oo ah ilo aad u qiimo badan oo loogu talagalay waayeelka iyo dadka naafada ah ee la kulma caqabado xagga isu diyaarinta cunnooyinka caafimaadka qaba.
Cuntooyinka ka sokow, Tom wuxuu sheegay inuu sidoo kale bogaadinayo booqashooyinka maalinlaha ah ee uu kaga yimaado mutadawiciinta. "Waa dad fiican," ayuu yidhi. Dadku waxay iila dhaqmaan wax aan ka ahayn sharaf iyo xushmad. ”
In kasta oo uusan dhigin keyd badan waxyaabaha maadiga ah, Tom wuxuu leeyahay hal hanti oo qaali ah oo uu ku raaxeysto la-wadaagga mutadawiciinta. Waa sawir la saxiixay oo ah Muxamed Cali oo taagan Sonny Liston. Sababtu waxay tahay, Tom wuxuu dareemayaa xiriir gaar ah Ali maadaama uu sidoo kale la halgamayay Cudurka Parkinson sanado badan.
“Waa halyeeygeyga,” ayuu yiri Tom. Wuxuu ahaa weligiisna kan ugu weyn. ”
Haddii adiga ama qof aad jeceshahay aad ka faa'iideysan karto cunnooyinka nafaqada leh ee uu ku bixiyo tabaruce, waad awoodaa isdiiwaangali inaad halkan kahelaysid cuntada.
Laga yaabaa 11, 2018